musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Italian Bloodline- Mashandisiro Ekuita Iyo Citizenship Nekudzika
Pfungwa yekuva vagari vemunyika nedzinza yakaunganidza mukurumbira mumakore achangopfuura. Vanhu vekuAmerica vachitsvaga midzi yavo kudzokera kune mamwe mativi enyika vanoda kuvatora zvakare uye kutanga hupenyu munyika yavakabva. Italy iri pakati penzvimbo dzakakurumbira dzinopa sarudzo yeJure Sanguinis kana mugari wedzinza. Kana iwe ukakwanisa kutsvaga nekusimbisa dzinza rako munyika, une kodzero yekureva chizvarwa. Chinhu chakanakisa ndechekuti ingori mavambo sezvo iwe uchikwanisa kupfuudza kurudyi kuzvizvarwa zvinotevera.
Iyo sarudzo inonzwika seyakanakisa kutanga rwendo rwako rwekubvakacha, asi iwe unofanirwa kunzwisisa zvinhu zvishoma usati waenda kumberi. Unogona verenga iyi gwara rakazara kana iwe uchida kutanga maitiro ekunyorera wotora kodzero yako. Mutsara wemadzitateguru ako unogona kushanda mukufarira kwako, saka ita shuwa kuti unoishandisa kune mukana wako. Rega titsanangure kuti ungazvikwidziridza sei kuti uwane chizvarwa cheItaly nedzinza.
Ziva zvimiro zvekukodzera
Ugari hwemuItaly nedzinza unowanikwa kune vanonyorera kuburikidza nedzinza remadzitateguru avo, pasina muganho pahuwandu hwezvizvarwa.. Zvinoreva kuti unogona kukumbira kuburikidza nevabereki vako, vanasekuru, sekuru nasekuru, zvichingodaro. Heano maitiro ekukodzera aunofanira kutevera kuti uise chikumbiro:
Kana iwe wakaberekerwa kuvabereki vekuItaly kana kutorwa semudiki (zera riri pasi pe21 rinoonekwa semudiki kana rakagamuchirwa pamberi pa1975 uye pazasi 18 kana rakagamuchirwa mushure me1975)
Mubereki / tateguru weItaly haafanire kunge asina kutora hukama nekuzvarwa kune imwe nyika pakazvarwa mwana wavo
Tateguru anofanira kunge ari mugari weItaly mushure mekubatana kwenyika muna 1861
Kukodzera nzira inonzwika seyakapusa sekuzvarwa kuvabereki veItaly. Asi pane zvimwe zvinosiyana nemutemo. Kana iwe ukawira mune chimwe cheizvi zvikamu, uchafanirwa kutsvaga imwe nzira yekushandisa. Hezvino izvo zvinosiya kune general rule:
Tateguru akaberekwa muItaly akazvarwa pamberi paJune 14, 1912
Iwe wakazvarwa nemukadzi weItaly pamberi pe1948
Iwe unoda kutora kuburikidza nemutsara waamai, uine mukadzi anokwira akazvara pamberi paNdira 1, 1948.
Vakadzi vekuItaly vaisabvumidzwa kupfuudza kodzero dzavo dzekuva vagari vemo gore ra1948 risati rasvika, zvichiita kuti mutemo uite rusarura. Kururamisa kunotevera kunobvumira vanyoreri vakadai kunyorera kuburikidza nehurongwa hwekutonga pasi pe1948 Rule.
Gara nhanho mberi uine zvinyorwa
Kana iwe uchikodzera nzira, unogona kuenderera mberi nehurongwa. Asi zvine musoro kuti utange nekuunganidza zvinyorwa nekuti iwe unozoda runyorwa rurefu rwekuita. Kunyanya, iwe unozoda zvitupa zvekuzvarwa, rufu, muchato, uye naturalization kusimbisa hukama hwemadzitateguru ako. Iwe unozozvida kubva kuItaly commune yatateguru vako pamwe nenyika yekuzvarwa. Zvingave zvakaoma kuvachengetedza kubva kumahofisi emunharaunda, asi iwe unofanirwa kuvatenga kuti vaite. Marekodhi akakosha akapihwa neUS anofanirwa kupihwa certification, kuturikirwa, uye kutumirwa kuti aonekwe sezviri pamutemo kuita izvi.
Iva netarisiro dzakajeka
Kana wangowana magwaro ako panzvimbo, unogona kunyorera chizvarwa cheItaly nedzinza. Iwe uchafanirwa kuzadza fomu rekunyorera uye woriendesa kune yako iri padyo mumiriri weItaly kuti utange. Vachakupa nguva yekuendesa magwaro uye kuoneka kubvunzurudzo. Kunyangwe iri nhanho yako yekutanga kuenda kune a pasipoti yechipiri, iwe unofanirwa kuve netarisiro yakajeka nezve maitiro uye nguva. Kugadzwa kunogona kutora nguva yakareba segore, zvichienderana nenhamba yezvikumbiro zvagara zvichiitwa. Unogona kufunga kunyorera kubva mukati meItari kuti ukurumidze rwendo. Iwe unogona kunyange kuseta yepamutemo pekugara ipapo panguva yekugadzirisa.
Batira pamwe nenyanzvi
Zvakanakisa kushandirapamwe nenyanzvi yekuItaly chizvarwa kuti ikubatsire nekuita. Ivo vanogona kukutungamira uye kukubatsira iwe padanho rega rega, kuve nechokwadi chekufamba kwakapfava uye kuri nyore kudzika mutsara. Nyanzvi yemuno ine mhando chaiyo yekubatanidza, saka kutsvaga magwaro ako muItari kunoita nyore. Vachaitawo shuwa kuti mamwe magwaro ese aripo uye hapana zvikanganiso uye zvakasiiwa mukunyorera. Kuve nenyanzvi inobata maitiro zvakare kunokupa chivimbo uye rugare rwepfungwa.
Kuva mugari wedzinza ndiyo nzira iri nyore yekupinda muItari uye kutanga hupenyu hutsva munyika yemadzitateguru ako. Asi maitiro anogona kuve akareba uye anotyisa, kunyanya kana iwe ukaifambisa pasina hunyanzvi hwehunyanzvi. Bata maoko nenyanzvi, uye iwe uchazadzisa chinangwa chako kunyange usati watarisira.